ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ တကယ်ရှိမရှိ | Burma Muslim
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ တကယ်ရှိမရှိ
By burmamuslim on April 22, 2014	ကိုလိုနီခေတ်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို မသုံးခဲ့ဘူးလို့ ဗြိတိသျှ သံအမတ်ဟောင်း ဒဲရစ်တိုကင်က မကြာသေးခင်က ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဧပြီ ၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ ဆောင်းပါး ခေါင်းစဉ်က The ‘Rohingya’ Identity – British experience in Arakan 1826-1948 ဖြစ်ပါတယ်။
(မကြာသေးခင်က) သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို လက်မခံကြောင်း အစိုးရကကြေညာလိုက်တဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတခု ဖြစ်လာတယ်၊
ဒါကြောင့် ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကာလမှာ ရခိုင်ဒေသ မူဆလင်တွေကို ဘယ်လိုများ သုံးနှုန်းခဲ့ကြပါလိမ့် ဆိုတာကို စူးစမ်းလေ့လာမိခဲ့တယ်လို့ သူ့ဆောင်းပါးကို အစချီ ရေးသားပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသကို ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း တရာကျော်ကာလ (၁၈၂၆-၁၉၄၈)အတွင်း ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာကို ဗြိတိသျှအစိုးရရဲ့ တရားဝင်အစီရင်ခံစာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ဆီက သတင်းလွှာ၊
သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေးစာများ စသဖြင့် စသဖြင့်တို့မှာတောင် ရည်ညွန်းသုံးစွဲခဲ့တာမရှိဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ဖို့ အင်မတန် ဝေးနေသေးတယ် ဆိုရင် ၁၉ဝ၁ ခုနှစ်က သုံးခဲ့ကြတဲ့ ‘Arakan Muhammadan’ ဆိုတာကို မသုံးသင့်ဘူးလား လို့လည်း သူက မေးခွန်း ထုတ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး အဆုံးသတ်မှာတော့ … ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးကာလမတိုင်ခင်အထိ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခိုင်လုံတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထား မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ရခိုင်ဒေသ မူဆလင်များအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်ပက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သဘောပေါက်သင့်ပြီ လို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ သူ့ဆောင်းပါးကို ဧရာဝတီဘလော့ http://blog.irrawaddy.org ကို ရောက်လာသူတွေထဲက ဖတ်ဖို့ အဆင်ပြေသူများအတွက် ကူးယူ ဖော်ပြပေး လိုက် ပါတယ်။
အပေါ်ပုံကတော့ စစ်တွေမြို့မှာ ၂၀၁၂ ဇွန်လက နယ်မြေလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပါတယ်။
There isavery simple answer to the matter of British practice. There was no such identity as ‘Rohingya’ known to the British Governments of either India until 1937 or of Burma after the separation from India on 1 April of that year. In the 122 years between their conquest of Arakan in 1826 and Burmese independence in 1948, notasingle reference to ‘Rohingya’ is to be found in any British official report, regional gazetteer, census, legislation, private correspondence or personal reminiscence. Even if suchaself-identification had been made, the census enumerator would have written ‘Chittagonian’ as they were under instructions to do in both the 1921 and 1931 censuses if alternative identities were offered, such as ‘Kawtaw’,’Barna’, ‘Babuji’ or ‘Magh’. *****
“That the Arakanese are being pushed out of Arakan before the steady wave of Chittagonian immigration from the west is only too well known…..the Arakanese not having been accustomed to hard manual labour for generations cannot and will not do it now; it has to be brought home to him that if he will not do more for himself he must give way to the thrifty and hard-working Chittagonian and his only reply is to move on. ” Page 89 – Akyab Gazetteer 1917 edited by Deputy Commissioner R B Smart.
In the absence of any British archival documentation over the 122 years of their stewardship of Arakan, I can only conclude that ‘Rohingya’ isadesignation which came into existence and usage after the Second World War, although it cannot be totally excluded that it might be connected to folkloric tradition unknown to the British. It is however most important to note that it wasadesignation which the Myanmar Government itself quietly acknowledged and even on occasions used, though only infrequently, in the late 1950s and early 1960s. These occasions, which included permission for radio broadcasts in the local dialect, are not in dispute and have been well documented. We might ask whether the Arakan Muslims of yesteryear in Akyab were indeed the descendants of the original Muslim residents of Arakan. This seems very likely. But where are they today, after the vicious sectarian fighting which followed the Japanese invasion in 1942, the disruptions of the Second World War, the Jihadist Uprising which lasted from 1948 to 1961 and the massive exodus to Bangladesh first in 1978 and then in 1991, and eventual repatriation? Are there any Muslim residents who can today provide historical documentation and assert, in the style of President Kennedy: “Ich bin ein Arakaner”?
ရခိုင် ပဋိပက္ခ ရေးသားသည့် Reuters သတင်းထောက်များ ပူလစ်ဇာဆုရ
http://burma.irrawaddy.org/news/2014/04/17/57592.html Share this:TwitterFacebookLike this:Like Loading...
Posted in: အထူး, ဆောင်းပါး	Post navigation